Ngenisa ama-imeyili we-Thunderbird ku-Kmail | Kusuka kuLinux
Ngenisa ama-imeyili we-Thunderbird ku-Kmail
Akukhona okokuqala ngisebenzisa KDE, empeleni izinyathelo zami zokuqala nge I-GNU / Linux base mayelana I-Debian Etch con I-KDE 3.x, kanye nenye yezicelo engizithanda kakhulu ngalokhu Imvelo yedeskithophu es I-Kmail iklayenti lakho lemeyili.
Into ukuthi, bengilokhu ngisebenzisa njalo Thunderbird nge-akhawunti I-POP futhi bengidinga ukuthola wonke ama-imeyili ami I-Kmail. Inqubo ilula impela futhi umphumela wokugcina muhle kakhulu. Sikwenza kanjani lokhu?
1- Siyavula I-Kmail bese usetha i-akhawunti yethu.
2- Uma lesi sinyathelo sesiphelile, sizokwenza kanjalo Ifayela »Ngenisa Imilayezo. Lapho sikhetha inketho: Ngenisa ama-imeyili nesakhiwo sefolda kusuka kuThunderbird / Mozilla.
3- Siya esinyathelweni esilandelayo ngokuchofoza ku: Okulandelayo futhi ngokuzenzakalela iwizadi ithola ifolda .thunderbird bakithi / ekhaya. Singakhetha ifolda ephelele, noma singahlola size sithole ifolda Mail.
4- Isilekeleli siqala ukukopisha yonke imilayezo namafolda ahambisanayo kufolda entsha. Silindele ukuthi iqede bese kuphelela lapho. Kuzofanele sihlele futhi sihambise amafolda kuphela I-Kmail.
Le wizadi inezinye izinketho ezithakazelisa kakhulu, njenge:
Ngenisa amafayela Mbox.
Ngenisa kusuka OS X.
Ngenisa kusuka Opera.
Ngenisa kusuka I-Sylpheed.
Ngenisa kusuka I-Outlook Express.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Ngenisa ama-imeyili we-Thunderbird ku-Kmail
Sanibonani Amathiphu Amahle.
Manje ngiwuthola kanjani lowo mphumela we-Smooth kumafonti wesitayela se-MAC OS?
Angikaze ngidlale iMac OS empilweni yami ukwazi ukuthi usho ukuthini ngeSmooth Efect .. 😕 Ungangitshela ukuthi usho ukuthini?
Ifonti ebushelelezi uma ungazi ukuthi kuyini futhi kuncane ku-Ubuntu okukhona nokuthi isihogo osenzayo kulezi zinhlangothi.
Mhlawumbe, uma ukhulume ngeSpanishi, izinga Ngabe ngakuqonda okokuqala.
Noma kunjalo… izinga, ubhekise ku- "Font Smoothing", okungukuthi, ukulwa namafonti.
Angazi ukuthi ungayingenisa kanjani imilayezo evela kumawindi bukhoma kwi-imeyili?
Eqinisweni, lokho kungangisiza kakhulu.
Angazi nhlobo. Anginawo ama-akhawunti alolo hlobo, engingakucabanga ngakho ukwenza okulandelayo:
- Ngakha i-IMAP yohlobo lwe-akhawunti ye-Kmail enedatha ye-Live Mail (angazi ukuthi kuzokwazi ukwenza lokhu).
- Ngidonsela imilayezo kusuka ku-akhawunti ye-IMAP iye ku-akhawunti yasendaweni ku-Kmail.
Kepha ngiyakutshela, angazi noma kuzokwenzeka yini ukwenza lokhu.
@elav ukuthi usebenzisa ini ukusatshalaliswa kwe-Linux
Akekho lapha ehhovisi manje, uzobuya kusasa. Noma kunjalo, ngizokuphendula ngaye
Sebenzisa i-LMDE (i-Linux Mint Debian Edition), noma i-Debian kuphela.
Kumazwana womsebenzisi ngamunye ungabona ukuthi usebenzisa yiphi i-distro, kanye nesiphequluli asisebenzisile ukufinyelela kusayithi lethu, ngokwesibonelo ngisebenzisa i-ArchLinux + Firefox, usebenzisa iWindows7 + Chrome, njll. 😉
Ngifuduka ngisuka eThunderbird ngiya ku-KMail cishe ama-2GB ama-imeyili, ngamakhulu ezinkulungwane i-HAHA.
Ngine-500MB SWAP ngoba bengicabanga ukuthi angisoze ngayisebenzisa, futhi ngine-2GB ye-RAM. Bekufanele ngenze kusebenze uNepomuk no-Akonadi ukwenza lokhu ngokuthembeke kakhulu, futhi ngine-SWAP cishe engaba ngu-400MB esetshenzisiwe futhi i-RAM yami eku-1.6GB idliwe, kambe lokhu kuyesabeka i-JAJAJAJAJAJA
I-elav sekuphele iminyaka engaphezu kwengu-3 ubhala lo mbhalo. Kepha inqubo yokungenisa ama-imeyili kusuka ku-Thunderbird iye ku-Kmail iselula nje.
Ekugcineni ngibuyiselwe ama-imeyili ami eKmail. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi kuzofanele ngikhiphe iThunderbird.
Ungazikhuphula kanjani ngokuzenzakalela ukwahlukanisa ekuqaleni (indlela elula)
I-KDE 3.5 isekhona ... ikhishwe i-KDE 3.5.13